Si sugan loo tirtiri kiniinkii Android hor iibin
Waxaad u malayn kartaa in warshad resetting kiniinkii Android tirtiri doonaa, oo masixi dhammaan macluumaadka shakhsiyeed, laakiin ma aha sidaas. Xogta ku qoysay oo tirtirayaa inteeda kale warshad la soo celin karin oo la isticmaalayo heli software qaar ka mid ah. Si dhab ahaantii masixi kiniinkii Android, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qaar ka mid ah software in ay xaqiijin doonaan, in aan raad xogta hadhay ama recoverable sida Wondershare MobileTrans ah. Waxa kale oo aad kula taliyay in ay marka hore gacanta masixi kiniinka iyadoo ay xulashada dib warshad hor inta aadan isticmaalin Wondershare MobileTrans ah. Sidoo kale waa inaad hubisaa in aad gurmad ah ee xogta la heli karo ka hor inta resetting warshad ama hor inta aadan isticmaalin Wondershare MobileTrans oo dhan. Dhammaan xogta tirtirayaa by Wondershare MobileTrans waa weligiis tagtay, si aad u baahan tahay inaad ka taxadartaa.
Imayladad, aad dukaamada kiniin Android xogta aad kaniini ee foomka aqrin iyo didaan. Tani waa lagama maarmaan haddii aad kaniini ku jira xog xasaasi ah. Marka awood on kiniin, waxa aad helaysaa in aad ku qortaa erayga sirta sirta taas oo la mid ah sida password screen qufulka aad kaniini ee.
Si sir qalab Android aad, raac tallaabooyinka hoose.
Tallaabada 1 : From aad menu Android, furo app goobaha iyo hoos ammaanka. Tubada Ammaanka in la furo goobaha ammaanka ah.
Talaabada 2 : Under menu sirta ah, dooro "qalab sir" iyo awood.
Waxaa lagama maarmaan ah in aad kaniini si buuxda loo soo oogay ama ugu yaraan 80% eedeeyay hor imayl qalab aad. Inkastoo, waxa ugu fiican in la sameeyo waa in ay sir kiniin ah halka waxaa ku amraya. Tani waa sababta oo ah habka qaadataa waqti iyo waxay noqon kartaa dhibaato haddii qalabka oo aan la iska tagaa dhamaystirka geeddi-socodka. Sidoo kale, markii ay qaadanayso in sir aad kaniini ku xiran tahay tirada xogta lagu kaydiyaa looxa. The ka weyn xogta, markii in ka badan ay ku qaadan doonto.
Bandhigyada dib warshad
Keddibna Factory sidoo kale waa hab kale oo soo reynaya sidii dhammaan xogta kiniin aad inkasta oo uusan run ahaantii wax walba oo cad. Waxaa lagama maarmaan ah si ay u sameeyaan hor inta aadan isticmaalin software in ay gabi ahaanba tirtiri kiniin. Si Factory celi kiniinkii Android, raac tallaabooyinka hoose.
Tallaabada 1 : From screen Home ku, riix badhanka Menu iyo tagaan oo ay u Settings.
Talaabada 2 : hoos dooro "kaabta & dib".
Talaabada 3 : Hadda hoos ugu rogto mar kale iyo "keddibna xogta Factory" jaftaa.
Talaabada 4 : Hubi macluumaadka looxa screen iyo saxaafadda Warbixannada ah.
Geedi socodka qaadan karaa daqiiqado yar, laakiin kiniinka reboot doonaa oo idin waydiisan sirta ama pin. Just la gelin sirta ah ama pin la isticmaalaa marka datada sii kiniin ah.
Si joogto ah masixi xogta la Wondershare MobileTrans
Habka ugu fiican ee masixi kiniinkii Android waa la SafeEraser Wondershare ah. Wondershare SafeEraser waa qalab ku haboon Android & macruufka "masixi" Codsiga loogu talagalay in si joogto ah tirtiro dhammaan macluumaadka shakhsinimo oo ka qalab US isticmaalaya Creech Military technology-ka qoraal moodo xogta unrecoverable ; soo laabtay qalabka si ah "Suuliyada nadiif ah" gobolka ka hor inta aadan iibin, deeqdo ama u ganacsadaan.
Si aad u tirtiri kiniinkii la shaqayn masixi All Data raac tallaabooyinka sida hoos ku siiyo.
Tallaabada 1 : Open Wondershare SafeEraser iyo xirmaan kiniinka Android inay computer la cable USB ah. Fadlan hubi in aad leedahay awood USB hab Debugging on kiniin ka hor isku xira. Markaas barnaamijka muujin doonaa sida hoos ku qoran.
Talaabada 2 : Riix masixi Dhammaan Macluumaadka ku saabsan barnaamijka. Markaas galaan "tirtirto" si loo xaqiijiyo amarka iyo guji masixi Hadda u dhaqaaqo.
Talaabada 3 : Barnaamijku waxa uu qaadi doonaa dhowr daqiiqo masixi dhammaan macluumaadka looxa android, oo ay ku jiraan music, videos, sawiro, xiriirada, barnaamijyadooda, iwm Waxay ku xiran tahay xog ku saabsan qalabka kaydinta.
Talaabada 4 : Markaas raac tilmaamaha ku qoran barnaamijka inay hesho on Factory Data celi ama masixi All Content looxa si ay u tirtiri oo dhan goobaha nidaamka.
Talaabada 5 : Hadda, kaliya dib u fadhiistaan ​​iyo dejiso halka SafeEraser Wondershare ka qabtaan shaqo oo dhan idiin ku gaar ah. Marka geeddi-socodka tirtiro ama nadiifinta qalabka kiniin Android dhamaato, app waxay muujin doontaa fariin xaqiijinaysa in shaashadda.
Fiiro gaar ah : Xusuusnow in Wondershare SafeEraser waa qalab aad u awood badan iyo xogta la tirtirayaa aan la eegayn waxa soo kabsaday karo. Sidaas, waa in aad qaadato heshiis weyn ee daryeelka halka tirtiro xogta la SafeEraser Wondershare oo kaliya u isticmaali haddii loo baahdo.
> Resource > masixi > si sugan loo ogolaan in aad Android Tablet ka hor inta Iibinta